PVC Sports olungisa
Tsiba mat Long
PVC Commercial Series ewuxhasa Solid
PVC Commercial-lokuphola Series
PVC eyohlobo olulodwa Series
PP ayisikhrimu Tile
Ngerabha Flooring Mat
Ngerabha Flooring Roll
Table Tennis nokwadala
indawo yokudlala enkulisa
YICHEN SOPRTS CO UMGANGATHO zeplastiki., LTD
Ngokholo okulungileyo arcade games, siya isiba inkokeli uhlobo ngamazwe kumgangatho zeplastiki.
Shijiazhuang Yichen Sports Plastic Floor Co., Ltd, ibekwe e Shijiazhuang Indawo kuphuhliso High-zobugcisa, i kwishishini imveliso ezihlangeneyo, nikela ngokwayo ukuba rearching & asakhasayo, ekhobokisayo, ukuthengisa, ukufakela kunye nenkonzo ye PVC umgangatho zeplastiki.
kwafumaneka Inkampani wethu ngo-2006 Ku yavela kaRhulumente kunye enterprisewho Collective Owned yakhiwe 1984, omnye uvulindlela yokuphanda & Ukuphuhlisa ezivelisa PVC zeplastiki nokwadala. Thina ezabo elinobuchule elizimeleyo uphando kunye nophuhliso iqela lethu, ukuba eqinisekiswe ubunkokeli bethu kushishino ukutyibilika PVC iplastiki yaseTshayina kwiminyaka emininzi kangaka.
Ekuqaleni ukusekwa Yichen, thina ikakhulu kubonelela ngokuzimeleyo uphando kwaye ziphuhliswe PVC series ezemidlalo ukutyibilika yethu zethu zasekhaya &
umthengisi ngamazwe kunye nenkampani lobunjineli, ukufumana igama elihle kakhulu kubathengi bethu. Kwangaxeshanye, siya sithatha theinnovation njengengqiqo yophuhliso, ugcine ukuphanda ekuphuhliseni iimveliso ezintsha. Ngo-2014, sahlasela uthotho ukutyibilika zorhwebo, kubandakanywa series naziiperile ingqolowa PVC ukutyibilika, UV enkulisa series PVC ukutyibilika, PVC yorhwebo ukutyibilika kunye mninzi exhaswa njalo, enika kwizinga eliphezulu kakhulu kwaye
Siye kudlule isiqinisekiso ISO: 9001, ISO14001, BV waseFransi, BWF kunye CE njl Ukongeza, siye saba lilungu kaHebhere egumbini E-Amafama ashishinayo kunye enye ngumlawuli ingqibelelo lweshishini we Yanzhao Chamber of E-Commercial ngo-2013 . Hebei Chamber of e-commercial ke kumazwe angaphandle kwegumbi yorhwebo yokuqala orhwebo kwiphondo Hebei.
Thina Yichen abantu bathobele umoya lweshishini le 'siziphatha kuluntu ngu ngokunyaniseka, ukufezekisa umsebenzi wethu ngokholo, kusinda umgangatho, ukuphuhlisa kunye nemvisiswano. "Uthabathe" Kukho kuphela ingcinga off-xesha, kodwa akukho kwimarike off-lonyaka ; Kukho nje iingcinga buthathaka, kodwa akukho emarikeni amandla "njengoko umgaqo wethu umsebenzi, ukusebenza kakuhle, ngokubonelela iimveliso ezisemgangathweni ngakumbi ephakamileyo ngenkonzo engcono kubathengi ngaphezulu. Yichen ukuzikhethela kwakho elungileyo ,. masenze ukusebenza kunye nokwakha ikamva elingcono njengabemi.
Indlela ukukhetha fl zeplastiki ezemidlalo ...
nokwadala plastiki wanaMhlanje uhlobo olutsha lwe izinto zokuhombisa umzimba ukukhanya ehlabathini lonke. Kuyinto ethandwa kakhulu ...
Yeyiphi PVC ezemidlalo nkampani ...
PVC umgangatho imidlalo luhlobo yomgangatho ephuhliswe ngokukodwa ibala lezemidlalo ngokusebenzisa PVC Materials. Ngokukodwa, kuba pr ...